राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा के छ ? « paniphoto
« ए. टि. एम. ले त अति नै गर्‍यो कस्तो डरलाग्दो मुर्दा शान्ति आजको ! »	राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा के छ ?
By -paniphoto- on Tuesday May 29, 2012	एकाएक संविधानसभा भंग भएपछि राजनीतिले नयाँ मोड लियो । कतिले प्रधानमन्त्री नै सर्वेसर्वा हुने अनुमान गरे, कतिले राष्ट्रपतिले केही गर्छन् कि प्रश्न सोझ्याए । हुन पनि संवैधानिक रिक्तता भएपछि र सरकार प्रमुख छान्ने कुनै आधिकारिक निकाय नभएपछि के हुन्छ, ठ्याक्कै भन्न सक्ने कोही भएनन् । कानुन पढेकाहरु पनि विभिन्न दलतिर ढल्कदै आफ्नै तालमा व्याख्या गर्न थाले । जेठ १४ को रातमा संविधानसभा भंग भएपछि प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले नयाँ निर्वाचनको घोषणा गर्दै सो को जानकारी गराउँन राष्ट्रपति निवास पुगेपछि धेरैलाई कटुवाल काण्ड दोहोरिएला भन्ने थियो । कांग्रेस एमाले लगायतको समूह रातारात प्रधानमन्त्री पनि स्वत: हटिसके भन्दै राष्ट्रपति निवास पुगेपछि यसमा थप बल पुगेको थियो । उनीहरुको तर्क थियो, संविधान सभा भंग भएको स्थितिमा प्रधानमन्त्री संविधान सभा सदस्य रहँदैनन् र प्रधानमन्त्री पद स्वतः खाली हुन्छ । अनि कार्यकारी अधिकार राष्ट्रपतिमा जान्छ र उनले नै सहमतिको सरकार बनाउँन दलहरुलाई आवहान गर्नेछन् ।
तर आज जारी भएको विज्ञप्तीले भने कांग्रेस र एमालेलाई धक्का दिएको छ । विज्ञप्तीमा प्रधानमन्त्रीको पद खारेज हुने कुनै पनि कुरा गरिएको छैन । सबैले सोचे बमोजिम सरकार कामचलाउ मात्रै भएको छ । अब बाबुराम सरकार ढाल्न अर्को चुनाव भन्दा कुनै उपाय रहदैन । या त सहमतिको सरकार बन्नु पर्ने देखिन्छ । सम्झनाका लागि- कामचलाउ भएरै माधव नेपाल ९ महिना पदमा बसेका थिए । राष्ट्रपतिले प्रस्तावित चुनावका बारेमा भने केही बोलेका छैनन् । वास्तवमा यसबारे बोल्नु राष्ट्रपतिको अधिकारक्षेत्रमा पर्दैन । संविधानको धारा ६३ मा नेपाल सरकारले संविधान सभाको निर्वाचन घोषणा गर्ने भनिएको छ । जसअन्तर्गत सरकारले निर्वाचन घोषणा गरेर त्यसको बोधार्थ मात्रै राष्ट्रपतिलाई दिने हो । जुन प्रधानमन्त्रीले दिइसकेकाछन् । अझ निर्वाचन घोषणा संवैधानिक असंवैधानिक भनेर सर्वोच्चमा रिट परिसकेको छ जसको बारेमा भोली सर्वोच्चले सुनुवाइ गर्ने बताइएको छ । पक्कै पनि सर्वोच्चले यसको संवैधानिक बाधा फुकाउँने छ ।
राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिको पूर्ण पाठ २०६९ जेठ १६
« ए. टि. एम. ले त अति नै गर्‍यो कस्तो डरलाग्दो मुर्दा शान्ति आजको ! »	9 comments to राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा के छ ?
· जवाफ दिनुहोस्	कानुन सम्मत र बढो चलाखी पुर्वक राष्ट्रपतिले विज्ञप्ती जारी गरेका छन् / उनको शैलि हेर्दा सर्प पनि मर्ने लाठी पनि नभाचिने जस्तो देखिन्छ / एकदमै संयम र सन्तुलित विज्ञप्ती /
कमेन्ट कस्तो लाग्यो ?:00	कुसुम श्रेष्ठ
· जवाफ दिनुहोस्	यस्तोलाई संयम र सन्तुलित हैन, अवसरवादी भन्ने हो कि भन्ने हाम्रो विचार हो / उसले म नराम्रो कुरा गर्दिन भन्ने शैलिमा नराम्रो कुरा गरेर जनतालाई झुक्याउँदैछ /
कमेन्ट कस्तो लाग्यो ?:00	Kedar Sharma
· जवाफ दिनुहोस्	ठिक छ / शक्ति सन्तुलन हुँदै छ जसरी भएपनि /
कमेन्ट कस्तो लाग्यो ?:00	kranti
· जवाफ दिनुहोस्	१. भर्खरै भंग भएको संबिधान सभाको बुहमत सदस्यबाट राष्ट्रपति पनि निर्बाचित भएको हुदा उसको हैसियत पनि काम चलाउ भन्दा ठुलो हुन सक्दैन ।
२.राष्ट्रपतिले अब ल्याउने व्यक्ति पनि संसदको सदस्य नहुने हुदा त्यो पनि कामचलाउ वा अबैधानिक नै हुन्छ ।
३.संबिधान सभाको भंग भएपनि कार्यकारी प्रमुखको हैसियतमा प्रधानमन्त्री रहने हो ।जसरी शेर बहादुरले संसद बिघटन गराउदा उनी कामचलाउ भएका थिएनन्।
४.सेनापति प्रकरणमा अबैधानिक कदमको निरन्तरता र हैसियत भन्दा माथिको काम हो । त्यसैले राष्ट्रपतिलाई पनि संबिधानत: कुर्सीमा बस्ने नैतिक अधिकार छैन । अहिलेको देशको अवस्था २०६४ चैत्र भन्दा अघिको हो ।
५.दलका नेताहरुलाई लागु नहुने संबिधान एउटा व्यक्तिलाई मात्र लागु हुन सक्दैन ।
६. संबिधान सभाको हत्या गर्ने स्वयम काग्रेस एमालेका नेताहरु नै हुन । संबिधानका बिबादित बिषयमा सहमति पनि नगर्ने र मतदानको प्रक्रियामा पनि नजाने हठका कारण
संबिधानको मस्यौदा जारी हुन नसकेकोले यसको सम्पूर्ण दोषी काग्रस र एमाले नै हुन।
कमेन्ट कस्तो लाग्यो ?:00	Rohan Gurung
· जवाफ दिनुहोस्	अझै पनि डर छ है राष्ट्रपति सँग, माओवादीले कटुवाल काण्ड नविर्सिए हुन्छ ।
कमेन्ट कस्तो लाग्यो ?:00	Nawa
· जवाफ दिनुहोस्	म चुप लगेर बसेको छैन भन्ने संदेश भए पनि रास्ट्रपति को बिग्यपति सवागत योग्य छ !
· जवाफ दिनुहोस्	जे होस् कानुनका धारा उल्लेख गर्दै राष्ट्रपतिले लोकतान्त्रिक शैली रोजे । यो निकै राम्रो कुरा हो । तपाईले भने जस्तै – कांग्रेस एमाले लगायतको समूह रातारात प्रधानमन्त्री पनि स्वत: हटे भन्दै राष्ट्रपति निवास पुगेपछि यसमा थप बल पुगेको थियो । उनीहरुको तर्क थियो, संविधान सभा भंग भएको स्थितिमा प्रधानमन्त्री संविधान सभा सदस्य रहँदैनन् र प्रधानमन्त्री पद स्वतः खाली हुन्छ । अनि कार्यकारी अधिकार राष्ट्रपतिमा जान्छ र उनले नै सहमतिको सरकार बनाउँन दलहरुलाई आवहान गर्नेछन् । यस्तै कुरा सोचेको थे मैले पनि ।
तर उनले लोकतान्त्रिक र कानुनी बाटो रोजेर निकै राम्रो काम गरेका छन् ।
कमेन्ट कस्तो लाग्यो ?:00	देवान राइ
· जवाफ दिनुहोस्	राष्ट्रपतिले निकै राम्रो भाषाको प्रयोग गरेर आफैमा सर्वाधिकार छ भनेका छन् । कुरा बुझ्नुहोस् सबैले । यो लोकतान्त्रिक परिपाटीमा सेरेमोनियल राष्ट्रपतिले यस्तो भन्न पाउँछन् ? एउटा माओवादीलाई तह लगाउँने नियत राखेर अरुले अलोकतान्त्रिक बन्दा पनि समर्थन गर्नु उचित हैन । यसको महगो मुल्य तिर्नु पर्ला ।
कमेन्ट कस्तो लाग्यो ?:00	बद्रि गुरुङ
· जवाफ दिनुहोस्	जे होस् राष्ट्रपति ले धेरै संयमी भएर विज्ञप्ती निकालेका हुन् यसपाली चै / राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा उम्मेदवार यीनै हुन् केरे